आइओएमका डिन डा. अग्रवालमाथि दुर्व्यहार गर्ने व्यक्तिद्वारा आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ आइओएमका डिन डा. अग्रवालमाथि दुर्व्यहार गर्ने व्यक्तिद्वारा आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा
आइओएमका डिन डा. अग्रवालमाथि दुर्व्यहार गर्ने व्यक्तिद्वारा आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७६ असोज २८ गते, १७:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौं—एक महिनाअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई दुर्व्यहार गरेको जिम्मा विजय थापाले लिएका छन् । उनले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिने बताए ।
रिपोर्टस क्लबमा बोल्दै उनले आफूहरुले पटक—पटक दिएको ज्ञापनपत्र डिन डा. अग्रवालले च्यातेर फालेपछि आफूहरु कालोमोसो दल्न बाध्य भएको बताए । विद्यार्थीको हकहित र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका निम्ति आफू आमरण अनशन बसेर इलामदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्दै थापाले तर आफ्ना मागहरु सरकार र सम्बन्धित निकायले नसुनेपछि बाध्य भएर कालोमोस दलेको उनले दाबी गरे ।
शैक्षिक अभियन्ता बताउने थापाले आफू आजै नेपाल प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने बताए । ‘मैले कालोमोसो दलेको हुँ, कानुनको सम्मान गर्दै म चक्रपथमा गएर प्रहरी समक्ष केही बेरमा आत्मसमर्पण गर्छु,’ उनले भने ।
उनले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र पैसा असुल्नेलाई पटक—पटक कालोमोसो दल्ने र जेल जाने बताए । थापा तिनै हुन् जो प्रा.डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशन बस्दा उनका विरुद्ध इलाममा अनशन बसेका थिए ।
गत भदौं २९ डिन अग्रवालमाथि पत्रकार बनेर समय माग गरेपछि कार्यकक्षभित्र पसेर मसी छ्यापेर दुर्व्यहार भएको थियो । उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता रहेको थापाले दाबी गरेका छन् ।